होलीहिग एचभी-368 हेडफोन समीक्षा, ध्वनि र स्वतन्त्रता छुट्याउनुहोस् ग्याजेट समाचार
होलीहाइग HV-368 हेडफोन समीक्षा
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | छवि र ध्वनी, समीक्षा
फेरि हामी वायरलेस हेडफोनको विश्लेषणको साथ फर्कन्छौं। यस अवसरमा, होलीहाइग फर्मको हातबाट। विशेष गरी हामी परीक्षणको लागि सक्षम छौं होलीहाइग HV-368। टेक्नोलोजी संग एक हेडसेट सत्य ताररहित ध्वनि तिनीहरूले धेरै थोरैको लागि धेरै प्रस्ताव गर्छन्।
एक हेडसेट संग सबै तपाईं एक अपराजेय मूल्य मा खोज्दै हुनुहुन्छ, र कि अब अधिक चाखलाग्दो पदोन्नति भन्दा तिनीहरू तपाईंको कम हुन सक्छ। अर्को हामी तपाईलाई होलीहाइग को HV-368 को बारे मा सबै कुरा बताउँछौं, हाम्रो विश्लेषण नभुल्नुहोस्।
1 सबैको पहुँच भित्र गुणस्तर ध्वनि
2 सोबर तर सुरुचिपूर्ण डिजाइन
3 होलीहाइग एचभी-368, प्रतिरोध र शीर्ष टेक्नोलोजी
4 होलीहाइग HV-368 डाटाशीट
5 होलीहाइ एचभी-368 हेडफोनका पेशेवर र विपत्ति
सबैको पहुँच भित्र गुणस्तर ध्वनि
हामी देख्छौं कि बजारमा असंख्य हेडफोनहरू कसरी छन्। र यस्तो देखिन्छ नयाँ मोडेल र ब्रान्डको प्रसार बढ्नेछ। आज हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं विकल्प मध्ये एक कि हामी राम्रो मूल्यमा ध्वनि गुणस्तर र ब्याट्री जीवन प्रदान गर्न सक्षम फेला पार्न सक्छौं।
होलीहाइग र यसको एचभी-368 मोडेल एक थप उपलब्ध विकल्प हो। हामी केही दिनको लागि तिनीहरूको प्रयास गर्न सक्षम छौं र त्यसपछि हामी तपाईंलाई आफ्नो अनुभव बताउँछौं र हामीले के भेट्टायौं अब पनि कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्। एक 52% छुट संग!
सोबर तर सुरुचिपूर्ण डिजाइन
बजार आक्रमण गर्ने मोडेल र फर्महरूको ठूलो हिमस्खलनको सामना गर्नुपर्‍यो, केही असाधारण डिजाइन को लागत मा भेदभाव प्राप्त गर्न चाहेको छ वा बोल्ड रंगहरू। यो केहि चीज हो जुन कहिलेकाँही कार्य गर्दछ, तर यदि यो राम्रो उपयोगकर्ता अनुभवको साथ हातमा जान सक्दैन भने यसले विश्वास गर्दैन।
को होलीहाइग HV-368 क्लासिक र औपचारिक डिजाइनमा शर्त। कुनै धम्की बिना को बारे मा रूपहरू र रंगहरू। तर सबै भन्दा माथि, प्रस्ताव मा केन्द्रित संगीत को मजा को लागी एक उत्पादन यसले यसको गुणस्तरका लागि प्रयोगकर्तालाई सन्तुष्ट पार्छ। र जसको डिजाइन ध्यान आकर्षण गर्दैन, केहि अधिक र अधिक रुचि।
को ढाँचा intraural ईरफोन यस्तो देखिन्छ कि यो निश्चित रूपमा सबैभन्दा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ। यद्यपि हामी सबैलाई यस प्रकारको हेडसेट बढी मनपर्दैन, राम्रोसँग राखिएकोले अन्य कुनैको तुलनामा धेरै राम्रो सुन्ने अनुभव प्रदान गर्दछ। होलीहाइग एचभी-368 यस ढाँचाको साथ प्रस्ताव गर्दछ प्याड को विभिन्न आकार को तीन संभावनाहरु एक हामीलाई फेला पार्दछ जुन हामीलाई पूर्ण रूपमा फिट गर्दछ।
हेडसेट छ राम्रो गुणस्तरको प्लास्टिकको निर्माण एक उज्जवल भाग बाहिर संग। र उही रंगको प्लास्टिक तर कानको बिरूद्धमा रहेको राउचर फिनिशको साथ। बाहिरीमा हामी फेला पार्दछौं प्लेब्याक कन्ट्रोल बटन जुन हामी कन्फिगर गर्न सक्छौं हामी फिट जति देख्छौं।
केस / चार्जर बक्सले सोबर लाइन अनुसरण गर्दछ हेडफोन डिजाइन को। आयताकार, रंग कालो र मिश्रित चमक र म्याट फिनिशको साथ। हेडफोनहरू जस्तै, केस चम्किलो छैन, तर यो अझै पनि आँखा मनपर्दो छ। यसले आफ्नो मिशन पूर्णरूपमा पूरा गर्दछ र योसँग एक अतिरिक्त छ जसले तपाईंलाई थप्न मद्दत गर्दछ।
हामीले एउटा भेट्टायौं विशाल ,3.000००० mAh ब्याट्री चार्ज त्यसैले हामी यसलाई एक पावर बैंकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामी छेउमा पाउँछौं मानक USB आउटपुट जहाँ हामी कुनै पनी उपकरणहरू चार्ज गर्नका लागि केबल प्लग गर्न सक्दछौं। उसको छेउमा छ USB प्रकार सी कनेक्टर बक्स आफै चार्ज गर्न।
बजारमा तपाईले हेडफोनहरू फेला पार्न सक्नुहुने छैन जसको बक्स दिन सक्षम छ times० पटक पूर्ण चार्ज सम्म। त्यसमा भर पर्दै तिनीहरू पूर्ण चार्जमा चार घण्टा लगातार प्लेब्याक प्रस्ताव गर्दछ। पहिले नै तपाईले ब्याट्री सकुञ्जेल चिन्ता लिनु पर्दैन घर बाहिर।
होलीहाइग एचभी-368, प्रतिरोध र शीर्ष टेक्नोलोजी
डिजाईन पक्षलाई ध्यानमा राख्दै, हामीले यी हेडफोनहरू प्रस्ताव गर्न सक्षम भएका चीजहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। र यो थाहा पाउनुपर्दछ कि हामी उनीहरूमा पछिल्ला प्रविधि पाउँछौं जब निर्णय लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ। होलीहाइग HV-368 छ ब्लुटुथ .5.0.० जडान, त्यसैले हामी एक छ जडान स्थिरता उत्तम थप रूपमा, हाम्रो स्मार्टफोनको लिंक स्वत: हुन्छ जब हामी तिनीहरूलाई चार्जर केसबाट हटाउँछौं। यसलाई निकाल्नुहोस्, हिट प्ले गर्नुहोस् र रमाउनुहोस् सबै समयमा तपाईंको संगीत को।
केही मा गणना गर्नुहोस् शारीरिक नियन्त्रणहरू यो केहि "प्रो" को लागि हो र अरुहरूका लागि "विपरित"। मुख्य कुरा यो हो कि यी बटनहरू हुन् हाम्रो मनपर्ने कन्फिगर योग्य, जुन सबैको साथ हुँदैन। र जसको साथ हामीले हातमा वा उपकरणमा पसीनाले वा आर्द्रतामा समस्या भोग्ने छैनौं।
होलीहाइग एचभी-368 को अतिरिक्त अतिरिक्तहरू, र त्यसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको बाँकी भागबाट भिन्न देखाउँदै छ IPX7 प्रमाणीकरण। को वाटरप्रूफिंगको अधिकतम स्तर तपाईं यस प्रकारको उपकरणमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, न पसिना र न पानी एक समस्या हुनेछ यी हेडफोनको साथ हाम्रो संगीतको मजा लिन सक्षम हुन। यदि तपाइँ तपाइँको संगीतको साथ पूर्ण भोल्युममा खेल खेल्न चाहानुहुन्छ, यी हेडफोनहरू हुनसक्छ तपाइँ खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
होलीहाइग HV-368 डाटाशीट
हेडफोन ढाँचा इन-कान
प्लेब्याक नियन्त्रण टच
प्रविधि साँचो वायरलेस ध्वनि -TWS-
ब्लुटुथ 5.0 संस्करण
स्वायत्तता hours घण्टा प्लेब्याक र hours ० घण्टा स्ट्यान्डबाई (प्रयोगको मात्रामा निर्भर गर्दै)
म्यागजिन क्षमता 3.000 mAh
हेडफोन तौल 4.54 g
आयामहरू 8.5 x 4.6 x3सेमी
मूल्य 42.99 €
होलीहाइ एचभी-368 हेडफोनका पेशेवर र विपत्ति
केहि हप्ताको लागि यी हेडफोनहरूको परीक्षण पछि हामी धेरै निष्कर्षमा पुगेका छौं। र सबै उत्पादनहरू जस्तो हामी परीक्षण गर्छौं त्यहाँ सँधै हुन्छ हामीलाई मनपर्ने कुराहरुर अरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ। विभिन्न ढाँचाहरू र बिभिन्न हस्ताक्षरहरूका परीक्षण गरिएका उपकरणहरूको अनुभवबाट, हामी यहाँ तपाईंलाई छोडिदिन्छौं कि हामीलाई के सबैभन्दा बढी मनपर्ने थियो र के हामीले यी वायरलेस हेडफोनहरूको बारेमा कम मनपराउँदछौं।
La शक्ति कि प्रस्ताव गर्दछ भोल्युम यो धेरै अन्य प्रमाणित मोडेलहरू भन्दा माथि छ।
La ध्वनि गुण तिनीहरूले पहिलो क्षण देखि सुखद आश्चर्यचकित प्रस्ताव।
को एक लोड क्षमता छ 3.000 mAh तिनीहरू "असीम" स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्दछन्।
El पावर बैंक को रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् यसको चार्जरको मामला रमाईलो छ।
,3.000००० एमएएच केसमा चार्ज गर्दै
El यति सहज डिजाइन यो मैला जस्तो लाग्न सक्छ।
ब्याट्री चार्ज गर्दछ जुन Heather यसले काम गर्दछ सामान्य भन्दा भारी.
लोड क्षमता पनि द्वारा प्रभावित छ बक्स आकार.
तपाईंको मूल्य, छुट बिना, यो केहि उच्च छ।
ठुलो चार्जर बक्स
छुट बिना उच्च मूल्य
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » होलीहाइग HV-368 हेडफोन समीक्षा
आवाज शक्तिशाली छ। तर यसमा केहि धेरै कष्टप्रद माइक्रो कटौती छ कि कुराकानी वा संगीत सुन्न असम्भव छ। यो केवल एक आकाशगंगा s5 को साथ हुन्छ। मैले तिनीहरूलाई रिसेट गर्न, फोन पुनः सुरु गर्ने, दूरी र फोनको स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छु। असम्भव यो मलाई अन्य हेडफोनको साथ हुँदैन।
के तपाई क्यामस्केनर प्रयोग गर्नुहुन्छ? सावधान हुनुहोस् किनकि यसले मालवेयर थप गर्दछ
गर्मी समाप्त गर्न तपाईंले हराउन नसक्ने सामानहरू [SWEEPSTAKES]